शाहरुखदेखि दीपिकासम्म बलिउड स्टारहरूले विवाहमा नाचेबापत कति पारिश्रमिक लिन्छन् ?
✍️: टिभी अन्नपूर्ण	 🕒 प्रकाशित: २०७८ पुष ११, आईतवार ०९:५८
बलिउडका ठूला स्टारहरू प्रायः विवाहमा सहभागी हुने गरेका छन् । यी बिहेमा बलिउडका सुपरस्टारहरुले पनि डान्स गर्ने गरेका छन् ।
यी सुपरस्टारहरु जस्तै शाहरुख खान र सलमान खान, कैटरीना कैफ, रितिक रोशन, दीपिका पादुकोण, रणविर सिंह र अक्षय कुमार । केही दिनअघि पूर्व केन्द्रीय मन्त्री प्रफुल्ल पटेलका छोराको विवाहमा सलमान खान, अनिल कपूर र शिल्पा शेट्टीले जयपुरमा नाचेको देखियो ।
यस विवाहमा सलमान खान आफ्नो सुपरहिट गीत ‘जुम्मे की रात’मा नाच्दै देखिएका थिए र उनको भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भएको थियो । यी स्टारलाई विवाहमा नाचेको देखेर मनमा अक्सर यो प्रश्न आउँछ कि उनीहरुले यसका लागि कति शुल्क लिन्छन् ? अब बलिउड स्टारलाई डान्सका लागि कसले कति पारिश्रमिक लिने भन्ने खुलासा भएको छ ।
बलिउड लाइफको भर्खरैको रिपोर्ट अनुसार शाहरुख खानले एउटा समारोहमा नाचेबापत ३ करोड भारु लिन्छन् । कट्रिनाको यो पारिश्रमिक अझ बढी छ र उनले विवाहमा डान्स प्रदर्शनका लागि ३.५ करोड भारु लिन्छिन् । सलमान खानको कुरा गर्दा उनी २ करोड र ऋतिक रोशन भने करिब २.५ करोड भारु लिन्छन् ।
रिपोर्टमा बलिउडको पावर दम्पती रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोणले करिब १ करोड भारु लिन्छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय आइकन प्रियंका चोपडाले विवाह समारोहमा प्रस्तुतिको लागि २.५ करोड भारु लिने गरेको उल्लेख छ । जसमा रणवीर कपुरले २ करोड र अक्षय कुमारले विवाहमा आफ्नो प्रस्तुतिका लागि २.५ करोड भारु लिने बताइएको छ ।